Yintoni ongayibona kwiiVicotria Falls?: Ukukhangela imijelo eAfrika | Ukuhamba kwe-Absolut
Yintoni ongayibona eVictoria Falls
Endaweni phakathi kwamazwe eZimbabwe neZambia, impophoma yenza umnyama, esenza enye yeempawu zemvelo ezimangalisayo hayi e-Afrika kuphela, kodwa nasehlabathini. Vumela ukuba uchitheke bubomi obuvelayo IVictoria Falls Ngolu hambo lonwabisayo. Ngaba uza nathi?
1 Intshayelelo emfutshane ngeVictoria Falls
2 Ukutyelela iVictoria Falls
Intshayelelo emfutshane ngeVictoria Falls
IAfrika lilizwekazi elinezindululo zalo zendalo ezenza ukuba libe lelona linomtsalane kwihlabathi. Iqela lamazwe apho i-safaris, intaba-mlilo eleleyo okanye amahlathi awo enza i-mosaic ekhethekileyo yamava. Kodwa ukuba kukho indawo yokundwendwela ubuncinci ebomini bakho, ngokuqinisekileyo ziVictoria Falls, Ingxangxasi ukuya kuthi ga kwiimitha ezili-108 ukuphakama kunye neekhilomitha ezi-1.7 ububanzi ngendlela yokutsiba umlambo iZambezi phakathi kwamazwe aseZimbabwe naseZambia.
Isacholo sendalo esibe ngumtsalane ophambili kuhambo lokuya kwelinye lala mazwe mabini angaphambili okanye iBotswana ekufutshane, iNamibia okanye uMzantsi Afrika, le yokugqibela ingoyena unikezela indibaniselwano yeenqwelomoya ezibalaseleyo xa kufikwa ekuphambukiseni kulo mmangaliso Amanzi nobomi.
Ifunyenwe eNtshona ngumhloli wamazwe waseScotland uDavid Livingstone, owagqiba kwelokuba athiye igama lokuhlonipha uKumkanikazi uVictoria. Indawo emva kokubhengezwa Ilifa lemveli lomntu ngu-unesco Ngo-1989, yaqala ukubonakala kwayo kwimephu yabakhenkethi apho iVictoria Falls nayo yadityaniswa njengenye yezo Iimpawu ezisixhenxe zeNdalo zeHlabathi.
Ngaba ungathanda ukwazi ukuba uziva njani xa usondela kolu lwimi lukhulu lwamanzi?
Ukutyelela iVictoria Falls
Amanqaku okuqala xa undwendwela iiFalls izixeko iVictoria Falls, eZimbabwe, neLivingstone, ikomkhulu laseZambia. Zombini ezi ndawo zinokufikelelwa ngokugqibeleleyo njengolwandiso ngexesha lokuya eMzantsi Afrika, umzekelo, okanye ngendlela eqokelelweyo ngexesha lamava kwilizwekazi laseAfrika.
Iindawo ezimbini eziphikisanayo zezona zilungileyo xa kufikwa ekufumaneni ezona ndawo zintle zeembono zeengxangxasi, IZambia ithathwa njengeyona iphakamileyo njengoko inika umbono olunge ngakumbi ngexa ukubona kwaseZimbabwe kunzima ngakumbi ngenxa yemali yomphunga eyenzeka kumawa adibeneyo. Nangona kunjalo, omabini la mazwe alungele ukukhetha indawo yokuhlala kwesinye sezixeko ezikufuphi kunye nokuthatha isigqibo malunga nendlela ofuna ukuyindwendwela kwiingxangxasi, nokuba yinqwelomoya okanye ngenyawo.
Ukuba uthatha isigqibo ngale ndlela yokugqibela, uya kuhamba ngeekhilomitha ezingama-20 ezahlula uLivingstone kwimpophoma kwaye uhambe ude ufike kwinto eyaziwa ngokuba yi «UMtyholi uPiscinta«, Ipuli yendalo apho unokuhlamba khona xa ukuhamba kuphantsi, kuba kwixesha lemvula, unokufikelela ngokulula kumanqanaba emitha enye kwimizuzu nje embalwa. Eyona ndlela iyiyo yokuqala kule paradesi apho unokujonga khona ujonge umnyama owubonileyo ngaphambi kokonwabela imisebenzi emininzi ejikeleze iiVictoria Falls.
Omnye wabo mkhuba bungee ukusuka kwi-Bridge Bridge eyaziwayo, inqunyanyisiwe ngaphezulu kweemitha ezili-100 ngaphezulu komlambo. Indlela eyahlukileyo yokufumana impembelelo yokuwa ngexabiso elifanelekileyo, kuba ukuba ukhetha ukubhabha ngaphezulu kwempophoma ngaphakathi kwinqwelomoya okanye kwihelikopta, ixabiso lingafikelela kwi-euro ezingama-300 kuhambo olubandakanya ukuwela ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye Omnye kwimizuzu nje embalwa. Emva koko, akukho nto ibhetele njengokufumana ibhiya kwenye yeebar ejonge emlanjeni ngaphambi kokuzama ukuthatha iifoto Iimbono ezili-16 abadibana enzonzobileni.
Kukwakho nethuba lokuwela ibhulorho ekhankanywe apha ngasentla edibanisa iZambia neZimbabwe, kodwa ukuze wenze njalo kuyakufuneka ube nevisa ezininzi. Inokulunga ukuba ufuna ukufumana umahluko phakathi kwamazwe omabini achazwe ngumbono wengxangxasi.
Kodwa ukuba kukho umtsalane omnye ekufuneka ufumene xa undwendwela iVictoria Falls, ngokuqinisekileyo loo nto inokwenzeka ukuba uthabathe inqanawa kuMlambo iZambezi, ngakumbi ukutshona kwelanga. Ukulungele ukonwabela amandla endalo eempophoma, indleko zokuhamba ngenqanawa ngenqwelomoya ixabisa malunga needola ezingama-60 kodwa kufanelekile xa kufikwa ekuboneni imikhombe okanye amaqwarhashe ajonge ukusela.
Ngexesha lokukhetha elona xesha lilungileyo lokuya eVictoria Falls kuhlala kulungile ukwazi ukuba ixesha leemvula liqala ngoDisemba ukuya ku-Epreli. Ngeli xesha ukuhamba koMlambo iZambezi kuphezulu kakhulu, ke ukuhlamba echibini likaMtyholi akunakwenzeka kwaye ukuphuphuma ngokwako kubangela amafu omphunga kangangokuba kubenzima nangakumbi ukuwucacisa lo mbono wendalo. Ngesi sizathu, sicebisa ukuba undwendwele ukuwa ngoJuni okanye ngoJulayi, kuba ngexesha lonyaka elomileyo elenzeka ukusuka ngo-Agasti ukuya ku-Novemba, ukuhamba kungancitshiswa. Nangona kunjalo, kwaye nangona kukho ukubonakala, nangaliphi na ixesha kulungile ukutyelela iVictoria Falls.
Yonwabela usuku kwiparadesi kwaye uzonwabele ngethuba lokujonga umtsalane wezixeko ezinje ngeLivingstone okanye ubhukishe ubusuku bokuhlala kwenye yeehotele ezininzi ezikuloo ndawo. Ngaba unokukuthelekelela ukuva ingxolo yokuwa ebusuku ngaphambi kokulala? Ukuba kuyenzeka.
I-Victoria Falls yenye yezona ndawo ziyolisayo e-Afrika kwaye iyeyona ndlela yokunxibelelana nezinye izinto ezinomtsalane kumazantsi eli lizwekazi. Thatha ithuba lokudibanisa neChobe National Park, indawo edibanisa elona nani likhulu leendlovu ehlabathini Botswana, iyaqhubeka kude kube I-Okavango Delta neengonyama zabo zokudada okanye uqhubeke de Namibhiya, elo lizwe apho Intlango yaseNamib yenza indawo eyodwa.
Ngaphandle koko, ungasoloko uthatha ithuba lokufumanisa ngcono uMzantsi Afrika, elo lizwe apho iipaka ezinje ngeKruger kunye neBig Five zayo ziyeyona ndlela yokunxibelelana neVictoria Falls ukuze ube namava ohambo lobomi.
Ngaba ungathanda ukutyelela iVictoria Falls?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Yintoni ongayibona eVictoria Falls
Kufuneka wenze ntoni kwilali yaseRocío